Budata Tools Ngwanrọ maka Windows
Budata Tools Ngwanrọ
Budata KMSpico, ntinye arụmọrụ Windows nefu, mmemme mmemme Office. Kedu ihe kpatara I kwesiri iji budata KMSpico? Ọ na-enye mgbe ebighị ebi, na-akparaghị ókè, ebighị ndụ nke sistemụ arụmọrụ Windows na mmemme Office. Enwere m ike ịsị na ụzọ kachasị mfe ma kachasị ọsọ iji rụọ ọrụ na ikikere sistemụ arụmọrụ Microsoft Windows na mmemme...
Site na ngwa CrystalDiskMark, ị nwere ike tụọ ịgụ na ide ọsọ nke HDD ma ọ bụ SSD na kọmputa gị. CrystalDiskMark, ngwa maka ịlele arụmọrụ diski, na -enye gị ohere ịlele ọsọ HDD na SSD nụzọ pere mpe. Ị nwekwara ike ịme ule agụ na ide na -enweghị usoro iji nweta data arụmọrụ diski zuru ezu na ngwa ahụ, nke ị nwere ike iji mee mgbe ị na...
IObit Driver Booster 8 bụ mmemme nefu nke na-enye ohere ịchọta ndị ọkwọ ụgbọ ala, imelite ndị ọkwọ ụgbọala na ịwụnye ọkwọ ụgbọala na-enweghị ịntanetị. Ọ bụ ngwa ọrụ akwadoro maka anyị iji tufuo nsogbu ọkwọ ụgbọala nke nsogbu anyị na-ahụkarị na kọmputa Windows anyị, ọ bụkwa ụlọ ọrụ nwere ahụmịhe nokwu ndị a bipụtara ya. Eziokwu ahụ bụ na...
CCleaner bụ ihe ịga nke ọma na usoro njikarịcha na usoro nchekwa nke nwere ike ịme nhicha PC, osooso kọmputa, iwepụ mmemme, nhichapụ faịlụ, nhichapụ ndekọ, nhichapụ na-adịgide adịgide na ọtụtụ ndị ọzọ. A na-enye ndị ọrụ Windows PC ụdị abụọ, CCleaner Free (Free) na CCleaner Ọkachamara (Pro). Lelọ ọrụ CCleaner Ọkachamara, nke chọrọ...
Budata Tencent Gaming Buddy ma nwee ọ playingụ igwu egwu PUBG Mobile, Brawl Stars na egwuregwu ndị ọzọ ama ama na PC na PC. Iji kpọọ Nsogbu nke Ezinụlọ, Oku nke Ọrụ Mobile, Garena Free Fire, Subway Surfers, Apex Legends, GTA (Grand Theft Auto), League of Legends, My Talking Tom na ọtụtụ egwuregwu egwuregwu ndị ọzọ na-ewu ewu na kọmputa,...
Taa, Winrar bụ mmemme zuru oke yana njiri mara mma netiti mmemme mkpakọ faịlụ. Mmemme a, nke na -akwado ọtụtụ ụdị faịlụ, na -adọrọ uche na ntinye ya na iji ya dị mfe. Ụdị Windows nke Winrar, nke na-akwado usoro ZIP na RAR nụzọ zuru oke ma na-enye nkwado zuru oke maka ịchekwa akwụkwọ, bụ ngwa ama ama nụwa niile ka faịlụ ghara ịgbasa na...
IObit Uninstaller bu ihe nejipu oku igha eji ya nenweghi koodu ikike. Ọ bụ netiti ndị free ngwaọrụ na Windows PC ọrụ nwere ike iji na-arụ kọmputa mmezi na iwepu mmemme nnọọ mfe na ngwa ngwa. A na-eji Windows 10 ewepụ nwayọ nwayọ yana nsogbu nsogbu nke mmemme na-enweghị isi yana data na kọmputa gị. Budata IObit Uninstaller Nihi na mgbe...
Instrumentul de reparare a computerului (Outbyte PC Repair) este un program de curățare, accelerare și protecție a sistemului pentru utilizatorii de computere Windows. Instrumentul de reparare a computerului, care se numără printre programele fiabile de reparare a computerului, nu numai că rezolvă problema de încetinire a computerului,...
7-Zip bụ sọftụwia na - akwụ ụgwọ nefu ma dị ike nke ndị ọrụ kọmputa nwere ike ịpịkọta faịlụ na folda na draịvụ ike ha ma ọ bụ decompress faịlụ. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ mmemme mkpakọ mmemme nahịa, 7-Zip bụ nhọrọ mbụ nke ọtụtụ ndị ọrụ nihi nkwado ya na usoro ya na enweghị ego ọ bụla. 7-Zip, nke ị nwere ike ịmalite iji mgbe usoro...
Site na nbudata Advanced SystemCare, ị ga - enwe usoro njikarịcha sistemụ nke so na mmemme kachasị aga nke ọma na mmezi kọmputa yana osooso kọmputa. Olee otú Wụnye Advanced SystemCare? Advanced SystemCare, nke bụ sọftụwia ị nwere ike ibudata wee malite iji nefu na kọmputa gị, bụ usoro njikarịcha sistemụ nke nwere ọtụtụ ngwaọrụ dị iche...
VLC Media Player, akpọkarị VLC netiti kọmputa ọrụ, bụ a free media player mepụtara nihi na ị na-egwu nile di iche iche nke media faịlụ na kọmputa gị na-enweghị nsogbu ọ bụla. Budata VLC Player - Free Media Player Na-akwado ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndọtị faịlụ niile maka vidiyo na vidiyo na vidiyo, VLC na-ebute ụzọ netiti mmasị...
Budata Master Clean Master bụ free kọmputa Cleaner na booster. Clean Master bụ mmemme Windows nwere nnukwu atụmatụ dị ka ihichapụ faịlụ ndị na-enweghị isi (ahịhịa), ọsọ ọsọ PC, nhicha nzuzo, mgbake faịlụ, mmelite akpaaka, faịlụ mkpocha dị ọcha, hichapụ faịlụ na folda kpamkpam, ihe nchọgharị akpaaka dị ọcha, melite ọkwọ ụgbọala ma dozie...
Rufus bụ obere ihe, dị mfe iji na mmemme nefu na-enyere gị aka ịmepụta diski USB diski. Oge ụfọdụ ị nwere ike ịchọ ya ma ọ bụrụ: Format hazie kọmputa gị ma ị ga-etinye sistemụ arụmọrụ gị site na ebe nchekwa USB site na enyemaka nke faịlụ onyogho ISO. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na kọmputa na-enweghị sistemụ arụmọrụ. Ọ bụrụ nịchọrọ...
Recuva bụ mmemme mgbake faịlụ nefu nke dị netiti nnukwu ndị na-enyere ndị ọrụ aka iweghachi faịlụ ehichapụ na kọmputa gị. Maka ụzọ ọzọ ka mma ma zuru ezu, ịnwere ike ịnwale EaseUS Data Recovery ozugbo. Ọkachamara data Iweghachite EaseUS, nke dị na ikuku ruo afọ 17, na-arụ ọrụ niile Recuva nwere ike ịrụ. Na mgbakwunye, ọ na-enye ọtụtụ...
Ihe Nchịkọta Microsoft Visual C ++ Redistributable maka Visual Studio 2015, 2017, na 2019 bụ ngwugwu ị nwere ike iji mee ihe omume, ngwa, na ọrụ dịka egwuregwu edere site na iji asụsụ mmemme. Ihe ngwugwu nwere ọba akwụkwọ nke ọrụ ndị a chọrọ. Aha Bekee nke ngwugwu ahụ, nke nwere nsụgharị 2 dị iche iche, bụ Microsoft Visual C ++ 2019...
Ọ dị mfe ihichapụ faịlụ na nchekwa ndị na-enweghị ike ihichapụ na Unlocker! Mgbe ị gbalịrị ihichapụ faịlụ ma ọ bụ folda na kọmputa Windows gị, A gaghị eme ihe a nihi na folda ma ọ bụ faịlụ ahụ mepere na mmemme ọzọ. Mechie folda ahụ wee nwaa ọzọ wdg. Ihe omume ị nwere ike iji dozie njehie ị nwetara. Unlocker download bụ nefu na otu esi...
Ọ bụrụ na ị na -eche ihe dị nime kọmputa gị, nke a bụ Speccy, mmemme ngosipụta sistemụ sistemụ na -akwụghị ụgwọ ebe ị nwere ike nweta ozi akụrụngwa ngwa ngwa. Site na ngwa a, ị nwere ike chọpụta ngwa ngwa ihe nrụpụta (CPU) na ozi ihe nlereanya nke sistemụ gị (Intel ma ọ bụ AMD, Celeron ma ọ bụ Pentium), ole RAM kọmputa gị nwere yana etu...
IObit Unlocker bụ obere ihe bara uru nke na-enye gị ohere ihichapụ faịlụ na folda gị nke ị gbalịrị ihichapụ mana na-ekwusi ike na agaghị ehichapụ ya. Ihe omume nke na-ewepu njehie ozi Enweghi ike ihichapụ faịlụ, Ajụjụ Nweta, A na-eji faịlụ a eme ihe faịlụ a ọzọ bụ nụzọ ọ na - arụ ọrụ - ọ dị ka Unlocker. Mgbe obere nwụnye, usoro ihe...
Nlekọta ọkwọ ụgbọ ala maara ihe bụ mmemme mmelite ọkwọ ụgbọ ala nefu maka ụdị Windows. Nlekọta ọkwọ ụgbọ ala maara ihe bụ mmemme na -akwado nchekwa data nke ihe karịrị ndị ọkwọ ụgbọ ala na ngwaọrụ 600,000, na -enyocha ngwa ngwa maka mmelite ma na -enye ọrụ mmelite akpaka. Nlekọta ọkwọ ụgbọ ala maara ihe na -enye ọrụ mmelite akpaka maka...
EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition bụ mmemme mgbake faịlụ na -enyere ndị ọrụ aka iweghachite faịlụ ehichapụ. Mgbe anyị na -eji kọmputa anyị, anyị na -ehichapụ faịlụ anyị na mberede. Dị ka ọ na -adịkarị, mgbe anyị na -ehichapụ faịlụ ndị ezigara na bilo recycle site na recycle bin, ọ gaghị ekwe omume iweghachite faịlụ ndị a nụzọ...
Onye na -ahọrọ ụcha ihuenyo bụ mmemme bara uru nke ukwuu nke na -enyere gị aka ijide koodu agba RGB, HSB na HEX maka agba ọ bụla masịrị gị na desktọpụ gị. Mgbe ịmechara mmemme ahụ, nke dị mfe iji, naanị ihe ị ga - eme bụ ịkwaga òké gị na mpaghara ịchọrọ ijide koodu agba wee pịa bọtịnụ Tinye na keyboard gị. Nụzọ dị otu a, koodu ụcha dị...
Microsoft Visual C ++ 2005 bụ ngwugwu na-ejikọ ọba akwụkwọ Visual C ++ chọrọ site na ngwa, mmemme, egwuregwu na ọrụ ndị ọzọ ejiri asụsụ Microsoft Visual C ++ Microsoft mebere. E nwere ụdị abụọ dị iche iche nke ngwugwu ahụ, aha bekee nke Microsoft bụ Visual C ++ 2005 Redistributable Package. You nwere ike iji ụdị Microsoft Visual C ++...
Registry Finder bụ mmemme ndekọ nefu, dị mfe ma baa uru ewepụtara maka abamuru nke ndị ọrụ kọmputa. Ihe mmemme a, nke na -arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ Windows, na -enye ohere iji chọta ihe ị na -achọ na ndekọ aha, nke dị mgbagwoju anya. Mana ihe ka mma bụ na mmemme nwere ike idezi faịlụ ndekọ aha karịa ịchọta faịlụ. Enwere m ike ịsị na...
DirectX bụ usoro nke ihe eji arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ Windows nke na-enye ohere sọftụwia kachasị na egwuregwu ka ọ rụọ ọrụ kpọmkwem na vidiyo na ngwaike gị. Egwuregwu ndị na-eji DirectX arụ ọrụ nke ọma na-eji ihe ndọtị nke ọtụtụ ihe eji arụ ọrụ na ngwaike gị, nke na-eme ka ahụmịhe mgbasa ozi gị dum. Wụnye DirectX kachasị ọhụrụ dị mkpa...
Mmemme HWiNFO64 bụ mmemme ozi sistemụ na -enye gị ohere ịnweta ozi zuru oke gbasara akụrụngwa na kọmputa gị, ọ bụkwa mmemme mmesapụ aka nihe gbasara nkọwa ọ na -enye gị. Nihi na site na HWiNFO64, nke nwere ike igosi ihe niile gbasara akụkụ ngwaike nke sistemụ gị, ị ga -enwe ọtụtụ ozi, ọkachasị nokwu dịka nchọpụta nsogbu. Mgbe ị na -agba...
Bandizip pụtara dị ka mmemme ngwa ngwa ngwa ngwa, ọkụ na free na ị nwere ike iji dị ka ihe ọzọ na mmemme mkpakọ faịlụ a ma ama Winrar, Winzip na 7zip na ahịa. Inye nkwado maka usoro mkpakọ niile na-ewu ewu maka ndị asọmpi akwụ ụgwọ ya na ọtụtụ ndị ọzọ, Bandizip adịbeghị anya jisiri ike bụrụ ọnụọgụ nhọrọ nke ọtụtụ ndị ọrụ nihi atụmatụ ya...
Cemu - Wii U emulator bụ mmemme emulator ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme egwuregwu Wii U na kọmputa gị. Nke a Wii U emulator, nke ị nwere ike ibudata ma jiri kpamkpam nefu, nwere ike ịme egwuregwu Wii U na kọmputa gị site na iji ike ngwaike nke kọmputa gị. Egwuregwu Wii U dị ka Akụkọ Mgbe Ochie nke Zelda: ume nke anụ ọhịa, Super...
EaseUS Partition Master Free bụ mmemme Windows nefu na-enye ohere nkewa, ihicha, ịkọwapụ, cloning, ịhazi HDDs, SSDs, draịva USB, kaadị ebe nchekwa na ngwaọrụ ndị ọzọ ewepụ. Site na EaseUS Partition Master Free, mmemme mmemme diski na-enye nsogbu na-enweghị nsogbu na sistemụ arụmọrụ niile sitere na Windows XP na Windows 10, na kọmpụta...
Disk zoro ezo bụ mmemme imepụta diski mebere nke ị nwere ike iji dị ka onye ọrụ Windows PC iji zoo faịlụ na folda. Ị nwere ohere ịchekwa faịlụ na nchekwa gị nke ị na -achọghị ka onye ọzọ hụ, na diski mebere ezoro ezo. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ Windows ọ bụla nwere faịlụ ma ọ bụ folda ha chọrọ izo. Ị nwere ike izochi faịlị na...
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike wepụ anya faịlụ ndị dị mkpa maka ọrụ gị, ezinụlọ gị ma ọ bụ gị. Ọ bụrụ na anyị zutere ụdị ihe a mgbe anyị na -arụ ọrụ ebe ọ bụla na Windows, ọ dị mma, ka emechara, anyị nwere ohere weghachite data ehichapụ ruo mgbe anyị tufuru ahịhịa, mana gịnị ma ọ bụrụ na anyị emehie ụdị ihe a na osisi USB, diski mpụga ma ọ bụ...
CPUCores :: Mee ka FPS gị dị elu bụ mmemme ngwangwa egwuregwu nke nwere ike idozi nsogbu gị ma ọ bụrụ na kọmputa gị na -agba egwuregwu nwere obere arụmọrụ yana njiri eserese dị elu. CPUCores :: Mee ka FPS gị dịkwuo elu, ihe na -akwalite arụmọrụ egwuregwu na -arụ ọrụ na Steam, na -achịkwa isi ka sistemụ arụmọrụ Windows na ọrụ Windows si...
Obere ma di ike mmemme, WinUSB na-enye gị ohere ịkwadebe bootable USBs. Na WinUSB, nke na - enyere gị aka icheta usoro Windows, ọrụ gị nwere ike ịdị na - acha ọkụ. Ninwe interface dị mfe ma dị mfe iji, WinUSB bụ mmemme dị ike ị nwere ike iji na kọmputa gị. Na-akwado ụdị faịlụ dị iche iche na ụdị BIOS, WinUSB na-enye gị ohere ịmepụta...
Site na NET Framework 4, nke mepụtara iji tọọ ntọala siri ike maka ngwanrọ ịntanetị ọhụụ, enwere ike ịkwadebe ngwa ngwa dị elu. Versiondị ọhụrụ ahụ dị iche na nke ochie na nkwado ya maka ụkpụrụ ụlọ ọrụ, uru nke iji ọtụtụ asụsụ, yana arụmọrụ dị elu ọ na-enye. NET Framework, nke nwere ngwa na ọba akwụkwọ maka ndị mmepe sọftụwia, bụ...
Windows 11 bụ sistemụ arụmọrụ ọhụrụ nke Microsoft webatara dị ka Windows na -esote ọgbọ. Ọ na-abịa na ọtụtụ atụmatụ ọhụụ, dị ka nbudata na ijikwa ngwa Android na kọmpụta Windows, mmelite na Otu Microsoft, menu mmalite, na anya ọhụrụ nke gụnyere nhicha na ụdị Mac. Ị nwere ike ịnwale sistemụ arụmọrụ Microsoft kachasị ọhụrụ site na nbudata...
CPUBalance bụ obere ngwanrọ dị irè. Site na mmemme na -egbochi mmemme na -arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ gị ka ọ na -agba nokirikiri ma nwee ike tụọ oge mmeghachi omume nke sistemụ wee gosi gị, ị ma ihe niile na -eme na sistemụ gị. Enwere ike ịkọwapụta CPUBalance Pro, nke bụ ngwanrọ bara uru dị ka mmemme nyocha oge nzaghachi sistemụ nke...
A pụrụ ịkọwa Battle.net dị ka mmemme ị nwere ike iji mepee, melite ma wụnye egwuregwu nke onye egwuregwu egwuregwu ama ama Blizzard. Mmemme Battle.net na-anakọta egwuregwu Blizzard niile ị nwere ma nyere gị aka ijikwa ha niile site na otu interface. Na Battle.net, ị nwere ike ibudata World of Warcraft, Diablo 3 na Starcraft 2 egwuregwu...
EaseUS Sistemu GoBack efu bụ mmemme ndabere sistemụ efu nke ị nwere ike iji gbanwee ma weghachite ụdị sistemụ arụmọrụ Windows gị. Mmemme a, nke na -enyere ndị ọrụ na -enweghị afọ ojuju aka ịlaghachi Windows 8 ma ọ bụ 7 ngwa ngwa mgbe etinyere nke ọhụrụ ewepụtara Windows 10, nwere ike ịkwado sistemụ gị site na otu ọpịpị, yana iweghachi...
CPU-Z bụ ngwa ọrụ sistemụ na - enye gị ozi zuru oke gbasara igwe nhazi kọmputa gị, bọọdụ na ebe nchekwa ya. Budata CPU-Z Ihe omume a na-egosi gị ọsọ ọsọ nke nhazi gị, ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ nime, na ụdị, ụdị, ozi nzuzo, onye nrụpụta, isi voltaji, multipliers, ọkwa nchekwa niile, yana ụdị na onye nrụpụta nke motherboard gị, atụmatụ BIOS,...
NIUBI nkebi Editor na-apụta dị ka mmemme nkewapụta disk kachasị ọsọ ma dịkwa nchebe. Ihe omume diski diski ike, nke nwere nkebi nke na-agbanwe, ngbanwe nkebi, cloning na defragmentation, mmezi diski na otutu ihe ndi ozo, enwere ike iji ya na Windows PC na sava. Cannwere ike ibudata usoro free nke diski nkewa usoro na kọmputa gị site na...
Rockstar Social Club bụ ngwa egwuregwu ga-ebudata ma ọ bụrụ na ịchọrọ igwu egwu egwuregwu Rockstar dị ka GTA 5, Max Payne 3 na LA Noire na kọmputa gị. Ngwa mbata egwuregwu a nke Rockstar bipụtara na -enyocha ikikere nke egwuregwu Rockstar arụnyere na kọmputa gị. Mgbe ịzụrụ igodo ngwaahịa dijitalụ nke egwuregwu Rockstar ọ bụla, ịnwere...
Digital Video Mmezi ngwa-enye gị ohere ịrụzi gị mebiri emebi video faịlụ dị nnọọ ole na ole clicks. Mgbe ị na-agbake a video site na-emerụ ngwaọrụ ma ọ bụ naghachi a ehichapụ video, ọ pụrụ ịbụ nezie na-ewute ma na-akụda mmụọ na-ahụ na faịlụ na-emerụ. Ọ bụrụ na faịlụ vidiyo dị ezigbo mkpa abịa na nke a, ngwa ngwa mmezi Digital Video nke...
IObit SysInfo bu ihe omuma ihe omuma nke eji enyere gi aka. Ọ na-enye gị nkọwa zuru ezu banyere isi ihe niile dị na kọmputa gị, gụnyere sistemụ arụmọrụ, processor, motherboard, ngwaọrụ nchekwa, ngosi, ọkwọ ụgbọala, netwọkụ na ngwaọrụ ndị ọzọ. Ọ na-ekpughekwa ozi nzuzo niile nke sistemụ gị. Ihe omume a nwere ezigbo nlekota oru nlekota nke...
Nnyocha Ahụike PC bụ ngwa dị mkpa iji chọpụta ma kọmputa gị ọ dị mma maka Windows 11 kwalite tupu ibudata Windows 11 ISO. Site na ngwa Kọmputa Nlele Ahụike nke Microsoft wepụtara nefu, ị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na kọmputa gị dị ugbu a na-emezu ihe ndị achọrọ iji rụọ ọrụ sistemụ Windows 11. Ọ bụrụ na ị na-atụle ịtụgharị site na Windows 10...
EZ Egwuregwu Egwuregwu bụ mmemme kọmputa na-enyere gị aka igwu egwuregwu nke ọma site na ịbawanye arụmọrụ nke kọmputa gị. EZ Game Booster bụ ụdị egwuregwu na-eme ka mmemme egwuregwu na-eme ka ahụmịhe egwuregwu gị ka mma site na imechi usoro ndị na-enweghị isi na iji ihe kọmputa arụ ọrụ. nwere ike ịkpọ a software. E nwere ngalaba abụọ dị...
Mmemme Wise Care 365 bụ mmemme na -arụzi mmezi iji mee ntọala ndekọ kọmputa gị, diski na ngwaọrụ sistemụ ndị ọzọ nụzọ kacha arụ ọrụ. Ị nwere ike iji mmemme a, nke dị nfe iji, welie arụmọrụ kọmputa gị nke ọma. Budata nlekọta amamihe 365 Na -echebe sistemụ gị na ozugbo - Mee ihe ozugbo mgbe ụfọdụ ngwa na -anwa ime mgbanwe na -enweghị...
Ime Anwansi Partition Recovery bụ mmemme nke nwere ike iweghachite faịlụ ehichapụ ma weghachite data sitere na mebiri emebi, usoro, nrụrụ aka na enweghị ike ịnweta diski na ngwaọrụ nchekwa na ụdị abụba ma ọ bụ NTFS. Ọ bụrụ na ị nwere diski na-ehichapụ nkebi ma ọ bụ diski ike na mpaghara ndị dị njọ, ngwa mgbake diski a nwere ike inyere gị...
Tunngle bụ ọgbọ egwuregwu na-abịa maka egwuregwu egwuregwu etinyere na p2p na VPN teknụzụ iji nye ndị egwuregwu egwuregwu kacha mma na ọhụụ ọhụụ nịntanetị. Tunngle na-enye ohere ka ndị na-egwu kọmputa nụwa niile na-egwu egwuregwu nịntanetị nịntanetị dị ka a ga-asị na ha na-egwu egwuregwu na Network Network. Principlekpụrụ ọrụ nke usoro...
SuperRam bụ ngwa nkwalite ọkachamara nke ị nwere ike nyochaa ma jikwaa ebe nchekwa (RAM) na kọmputa gị. Mmemme a, ebe ị nwere ike iji mgbanwe dị mfe ma dị mfe mee mgbanwe niile, ọbụlagodi nwatakịrị nwere ike iji na -emeghị mgbanwe na akụrụngwa gị, na -enye arụmọrụ ka mma karịa ọtụtụ mmemme mgbanwe ebe nchekwa. inwe ọtụtụ RAM na -eme ka...